ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ရခိုင်အစီရင်ခံစာဟာ ပြည့်စုံမှု မရှိကြောင်း AI အဖွဲ့ကြီးက ဝေဖန် click
- ရန်ကုန်တိုင်း ဥက္ကံမြို့မှာ ဆူပူမှုဖြစ်ပွား click
- မိတ္ထီလာ အကြမ်းဖက်မှု နှစ်ဘက်လျှောက်လဲချက် တရားရုံး ကြားနာ click
- ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှပြန် ရခိုင် ၆၀၀ ခန့် အခက်အခဲတွေ့ click
- လက်ပံတောင်းတောင် ပြဿနာနဲ့ ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ (တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း) click
- တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ ပွင့်လင်းမြင်သာရေး ကွန်မြူနစ်ပါတီ သတိပေးတော့မည် click
- ဝ တပ်ကို တရုတ်အစိုးရက တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တွေ ပေးပို့ကူညီ click
- မွန်ဂိုလီးယားက ဒီမိုကရေစီညီလာခံကို အမေရိကန် အားရ click
- ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်စွဲတွေ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အသုံးပြုဖို့ သမ္မတ ပန်ကြား click
- သမ္မတရဲ့ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆု (ရုပ်သံ) click
- ဖို့ဒ် ကားကုမ္ပဏီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စတင်တော့မည် click
- မြန်မာပြည်မှာ Ford ကုမ္ပဏီထုတ် ကားတွေ ရောင်းမည် click
- ရန်ကုန် Ford ကားကုမ္မဏီ အရောင်းပြခန်း (ရုပ်သံ) click
- ဆီးရီးယား ဓာတုလက်နက် အသုံးပြုမှု အမေရိကန် ချက်ချင်း တုံ့ပြန်မည်မဟုတ် click
- Boston အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ သဲလွန်စသစ် တွေ့ရှိ click
- ရုရှား-အမေရိကန် ဂီတဆက်ဆံရေး (ရုပ်သံ) click
- အမေရိကန်-တောင်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေး (ရုပ်သံ) click
- နယ်သာလန် ဘုရင်သစ် နန်းတက်ပွဲ ကျင်းပ click
- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြိုကျအဆောက်အဦးပိုင်ရှင် ပစ္စည်းအားလုံး တရားရုံး ချိတ်ပိတ် click
- Dhaka ကုန်တိုက် ပြိုကျမှုမှာ သေဆုံးသူ အလုပ်သမားတွေ နစ်နာကြေး ရမည် click
လက်ပံတောင်းတောင် ပြဿနာနဲ့ ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ (တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း)မှာ ပြင်ပပရောဂဆိုတာရယ်၊ ဒေသခံတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေရယ်အပေါ် နော်ဝေက ဦးမောင်မောင်မြင့် ဆွေးနွေးသွားတာ ကောင်းတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာ မှန်တာ ၊ မှားတာ ထားလိုက်ပါတော. ၊
.... အစီရင်ခံစာကြောင်. နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်. ဖြစ်ရပ်တွေ ထဲက .... ငြိမ်းချမ်းတဲ.နည်းနဲ. ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်
သူများကို ... ယခင် စစ်အစိုးရပုံစံအတိုင်း .... လက်နက်နဲ.
.. မြန်မာနိုင်ငံ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဥက္ကဌ
.. လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ပဋိပက္ခ စုံစမ်း
.. ပြည်သူ.လွှတ်တော် အမတ်
.. .. .. စသည်. ဂုဏ်ပုဒ်များနဲ.အညီ
.. အပြစ်မဲ.တောင်သူတွေ သွေးမြေကျ နှိမ်နှင်းခံရမှာကို
ကြိုတင်တွက်ဆ ထားသင်.ပါပြီ ။
ဘာ.ကြောင်.လည်းဆို .. ပြည်သူအများက အပြစ်မဲ.တောင်သူတွေ သွေးမြေကျ နှိမ်နှင်းခံရမှာကို
.. ဖြစ်ပွားလာရင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဥက္ကဌ အနေနှင်.၄င်း ၊
စစ်ဆေးရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ အနေနှင်.၄င်း
ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ ငယ်ကျိုးငယ်နာ တွေပြောပြီး အပုတ်ချဦးမယ်။